DEG DEG Murashaxiinta oo ka horyimid habka loo wado doorashada, dalbadayna lix qodob - Allbanaadir
Home Warka Maanta DEG DEG Murashaxiinta oo ka horyimid habka loo wado doorashada, dalbadayna lix...
DEG DEG Murashaxiinta oo ka horyimid habka loo wado doorashada, dalbadayna lix qodob
Golaha Midowga Murashaxiinta Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay soo saraeen uga horyimid qaabka loo wado doorashada golaha shacabka, waxayna ka digeen cawaaqibka ka dhalan kara haddii xaaladda ay sidan ku socoto.
Golohu wuxuu dadaal xooggan ku bixiyey in uusan muddo kororsi dalka ka hirgelin, wuxuuna weli u taaganyahay in uu hor istaago muddo kororsi dadban iyo doorasho boob ah, taasoo baalmarsan dastuurka dalka, caddaalada iyo habraacyada doorasho.
Xaaladda uu maanta dalkeenna ku suganyahay ma aha mid xamili karta doorasho loo daahiyo dano gurracan ama la boobo, sababtoo ah daaha doorashada ama boobka doorasho waxey dalka u horseedaysaa xaalad cakirnaan iyo colaad sokeeye.
Goluhu wuxuu ku boorinayaa Raysal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble in uu dalka ku hoggaamiyo sida dastuurka waafaqsan oo ay dalka ka qabsoomaan doorasho xor iyo xalaal ah, daahfurnaan leh, waqtigooduna cayimanyahay.
Ra’iisul Wasaaraha waa inuu tixgeliyaa kalsoonidii ay shacabka Soomaaliyeed iyo saamileyda siyaasadeed siiyeen, masuuliyadiisana uu si dhab ah uga soo dhalaalo.
Midowga Musharaxiinta ayaa soo jeediyay Lixdaan qodob.
2- In ay doorashu noqoto mid si daahfurnaan leh ku dhacda, loona madaxbanneeyo odayaasha dhaqanka beesha kursiga ku astaysan soo xulista ergada, fursad simanna loo siiyo tartamayaasha oo idil, goobta doorashadu ka dhacaysana loo sinnaado.
4- Goluhu wuxuu ka dhigayaa cawaaqib xumida ka dhalan karta in la boobo doorashada kuraasta Golaha Shacabka. Dalkeenu wuxuu ka soo kabanayaa colaad sokeeye, doorasho la boobana natiijadeedu waa colaad sokeeye, sidaas darteed waa in aan si wadajir ah uga hortagnaa boobka doorashada.